Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Nihemotra ny Skål 2021 Quebec World Congress
Nihemotra ny Skål 2021 Quebec World Congress
Skål 2021 Kongresy Erantany Quebec
Ny filohan'ny Skål International, Bill Rheaume, dia nanambara fotsiny fa ny Kongresy Erantany Iraisampirenena Skål izay nokasaina hatao tamin'ny volana oktobra dia nahemotra hatramin'ny Desambra amin'ity taona ity.
Rehefa manomboka miala tsikelikely amin'ny krizy COVID-19 izao tontolo izao dia naverina tamin'ny toeran'ny mpandoro eo aloha ny hetsika sy ny dia.
Izao tontolo izao dia mbola manana fomba handefasana vaksinin'ny olona ary hahatakatra ny filàna hijanonana ho voaro amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina sy ny fanaovana sarontava.
Mikasika ny Kaongresy Eran-tany Québec Skål 2021, ny fanemorana dia midika hoe mankafy ny fihaonana amin'ny tany ririnina ao an-tanàna mpampiantrano.
Nanazava i Skål International fa ny iray amin'ireo mpiorina COVID izay efa niainan'ny tsirairay nandritra ny taona lasa dia ny vaovao momba ny fanemorana ny hetsika. Raha mbola mitohy ny fanaovana vaksiny, dia misy ny positives mivoaka amin'ny famoizam-po mifandraika amin'ny coronavirus COVID-19. Mahatsiaro ho manana fanantenana ny olona ary manomboka mandinika ny paikady fanarenana ny firenena.
Tamin'ny fivorian'ny Birao Mpanatanteraka Iraisam-pirenena tamin'ny volana martsa Skål dia nisafidy ireo safidy momba ny Kongresy Erantany Manerantany Skål 2021. Taorian'ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa tamin'ny Skål International Quebec Congress LOC, ny Birao Mpanatanteraka dia nanaiky ny hanemorana ny Kongresy tamin'ny datin'ny Oktobra lasa teo ka hatramin'ny 9-13 desambra 2021.
Mametraka fihodinana tsara amin'ny toe-javatra, Skål International mino fa tena misy vokany tsara io fanapahan-kevitra io, ao anatin'izany:
• Fahafahana mampiseho an'i Quebec City mandritra ny iray amin'ireo vanim-potoana roa tsara indrindra - Desambra hatramin'ny feb.
• Skålleagues dia afaka miaina hetsika “mahafinaritra” marobe.
• Omeo fotoana bebe kokoa hanaovana ny vaksiny, Trangana coronavirus mihena ary mihena ny fameperana.
• Fotoana bebe kokoa ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena mangataka visa fidirana ho an'ireo mila azy ireo.
Nilaza ny filoha Rheaume fa vao avy niverina avy tany amin'ny fitsidihana ny tanànan'i Quebec izy izay nihaonany tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny klioba, ary azony atao ny milaza fa faly izy ireo amin'ny fotoana anehoana ny tanànany mahafinaritra rehefa eo an-tampon'ny hazavana sy ny lanezy ary ny ririnina ny hetsika. .
Ny LOC an'ny Kongresy koa dia miasa fatratra mba hampiasana ny fifandraisan'ny governemanta amin'izy ireo, hiantohana araka izay azo atao ny fanohanana an'io hetsika lehibe io.
Ny daty voafidy dia hiantoka traikefa mahatalanjona ary hanana fotoana be dia be ny mpandray anjara hody any amin'ny Krismasy.